IChiefs izoncela izithupha iBucs neDowns bezitika ngabeWits
YIWO la madoda, uBobby Motaung oyimenenja kwiKaizer Chiefs nomqeqeshi u-Ernst Middendorp, azohlala abukele izimbangi zizitika ngezilomo zeBidvest Wits Isithombe: BACKPAGEPIX
MIHLALI BALEKA | June 12, 2020
IZINDABA zokudayiswa kweBidvest Wits seziholele ekutheni isabalale imibiko efaka nezilomo zayo endalini kanti iMamelodi Sundowns ne-Orlando Pirates bafesile ngamabhakede balungele ukukleza kodwa iKaizer Chiefs ayikwazi kusondela.
NgoFebhuwari iChiefs igwetshwe yiFifa ukuba ingasayinisi badlali amawindi amabili okushintshana ngabadlali ngemuva kokulahlwa yicala ekusayiniseni injini yaseMadagascar, u-Andriamirado "Dax" Andrianarimanana eqenjini langakubo, iFosa Juniors eminyakeni emibili edlule.
IJuniors isole iChiefs nokuyidlela amandla kwazise yazitapela nje kulo mdlali ngoba ithi eMadagascar abanayo iligi ekhokhelayo. Ibisihlawuliswa u-R2.8 million ohabisana nenzalo.
IChiefs ayiyingenanga eyokukhokha nokuholele ekutheni iJuniors iludlulisele phambili udaba. Lokho kulandelwe wukuthi iChiefs ivalwe namawindi amabili ukusayinisa .
UDax yena ubesemiswa izinyanga ezine engadlali ibhola.
NgoLwesithathu siphelile isigwebo sikaDax, nokusho ukuthi noma yinini uma kubuya imidlalo yeligi usengadlala kwiBlack Leopards abolekiswe kuyo.
IChiefs ngakolunye uhlangothi isemanyaleni kwazise isicelo sokuthi kubuyekezwe isigwebo sayo siyoze sihlalelwe ngoSepthemba 9 nokusho ukuthi zonke izilomo zeWits zizoyidlula nje ibukela zizitika izimbangi zayo.
Iwindi lokuhwebelana ngabadlali ngokweFifa kuzokwenzeka livulwe ngenyanga ezayo lize livalwe ngo-Agasti. IFifa nokho ithe izinkontileka zabadlali zizoqhubeka kuze kube amaligi abo ayasongwa.
Uma iChiefs ingakwazi ukuguqula isigwebo, izolimala kakhulu kwazise ukuba seqhulwini lelog ye-Absa Premiership kuyibeka ethubeni elihle lokubuyela kwiCaf, nokudinga isikwati esikhulu.
IWits, elinye lamaqembu amakhulu eNingizimu Afrika, kubikwa ukuthi isidayisiwe ngemuva kokuvuma inkinga yezomnotho ngasekuqaleni kwale sizini - nokuyinto okungenzeka ukuthi idalwe wukudedela kwabo isaka emakethe besika abadlali kula masizini edlule.
UThulani Hlatshwayo sekuvele ukuthi usendleleni ebheke kwi-Orlando Pirates, osekunesikhathi eside imfuna uthuli Isithombe: BACKPAGEPIX
Emasontweni ambalwa edlule kuke kwavela ukuthi nenkinsela thizeni yaseLimpopo, eyaziwa ngelikaMasala Mulaudzi, isivele iwuthumele u-R10 million kwiClever Boys njengesibambiso ngemuva kokudayisa iTshakhuma Tsha Madzivhandila (TTM) edlala kwiGladAfrica Championship ngenyanga edlule.
Intshisekelo kaMulaudzi yokuthuthela iqembu eLimpopo, isidale ukuthi izilomo zeWits ezisathanda ukuzinza egoli, zibheke izindlela zokwenza lokhu.
Izolo iTTM igcine ikuqinisekisile ukuthi isizodlala esigabeni esiphezulu sePSL ngemuva kokuthenga igunya kwiWits. Kuvela ukuthi leli qembu liba khululile abadlalali beWits ukuthi bakhulume namanye amaqembu.
Imibiko kuleli sonto ithe ukaputeni weClever Boys neBafana Bafana, uThulani Hlatshwayo nesikhwishikhwishi saseNamibia, uDeon Hotto, sebevumelene nePirates ukuthi bawelele eParktown beshiya iSundowns itholoza kwazise ibibafuni bobathathu nonombolo-10, uHaashim Domingo.
Nokho iSundowns isangangena kubadlali abanjengoBuhlebuyeza Mkhwanazi, Thabang Monare, Sifiso Hlanti noGift Motupa nokuyinto engagcizelela ukuthi kuhlomule amaqembu amabili ngokuhlakazeka kweqembu laseBraamfontein.
Uma iChiefs iba senhlanhlenni ngoSepthemba idedelwe ukuba isayinise abadlali, isiyobanga izinsalela nofishi abancane ngoJanuwari.